Zappia Gioielli Jewellery - ICatania
Indalo yama-Artisan Yama-Unique Nama-Precious Amagugu
4.6 /5 amavoti (amavoti angama-8)
Ama-Zappia Amagiya, ku Corso Sicilia 24 a Catania, kunjalo Ubucwebe e Igolide ukwehlukaniswa ubukhona iminyaka engaphezu kwengu-50 kulo mkhakha nangogqozi nobuciko ekwakhiweni kwe ubucwebe. Ngaphezu kwalokho, Ama-Zappia Amagiya è Ukulungiswa kobucwebecwebe namawashi lemikhiqizo edume kakhulu.
Gioielleria Oreficeria Zappia Jewels in Catania - Umlando wePhasika
Ama-Zappia Amagiya, a Catania, wazalwa ngonyaka we-1960 kusukela othandweni lweabasunguli bomlando ababili uNuccio Argurio noPasquale Zappia.Imvelaphi yokuvelela Ubucwebe e Igolide ICatania ifakwe emlandweni wobungcweti besiqhingi: laba bobabili ababambisene bahlela ukusebenzisa wonke amasu atholakala eminyakeni yokufunda nobungcweti asetshenziswe emhlanganweni wokucwaninga wegolide omkhulu ngemuva kwempi. Kusukela kumiyalo yokulungisa nokudalwa kobungcweti kwe ubucwebe kuphela kwikhawunta, i-Argurio neZappia ziwina ukwethenjwa kwamakhasimende ngenxa yendlela yokuzibophezela, ubuhlakani nobungcweti. Inqubo yokukhiqiza ayikude ukuthi ize futhi nalolu banga lokunikezwa okuphakanyisiwe Ubucwebe e Igolide I-Zappia, okuvuselelwa yincazelo ephezulu yekhwalithi yezobuchwepheshe, inhlangano ebumbene yesakhiwo nokuphathwa kwezimanje kokuphatha. Kuze kube manje, i- Ubucwebe e Igolide I-Zappia ingenye yamagama aphezulu emkhakheni wegolide ngamaqoqo we ubucwebe kubonakaliswa ngocwaningo lwezinto zokwakha, ukunaka imininingwane nobungcweti bemisebenzi yobungcweti.
IGioielleria Oreficeria Zappia Gioielli eCatania - Ukudalwa KwamaGugu Angafani Namaqoqo
Ama-Zappia Amagiya, eCorso Sicilia 24 a Catania, eminyakeni engaphezu kwengu-50 ngemuva kokusekelwa kwayo, manje ingenye yamagama abaluleke kakhulu emkhakheni wegolide wedolobha. Ngenxa yokuqamba okusha kwezobuchwepheshe kanye nesipiliyoni sabasebenzi bayo bokudala, Ubucwebe beZappia Goldsmith uyakwazi kuthuthukisa amaphrojekthi ku-prototyping kanye nokukhiqizwa kwengcezu eyodwa ne-serial, ngokubhekisisa imininingwane kanye nekhwalithi yezinto zokusetshenziswa ezingavuthiwe. Eziningi amaqoqo we ubucwebe ebonakala ngaboinkululeko yemibala, inkululeko yokuzikhethela ezimilo nasendleleni ye-retro. Izicucu ezihlukile ezifanaUkuhlala wedwa, uphawu lwesithembiso esiphakade; I-Trilogy, uphawu lwesipho saphakade; Namasongo Tennis, ukuvumelana kokukhanya: ekukhetheni ngokucophelela amaDayimane nokunaka imininingwane Ubucwebe beZappia Goldsmith ihlanganisa ubuciko bokwenza ubuciko kanye nemfundo yezobuchwepheshe ukudala izinto eziyigugu zokwenza ubuhle obungaphelelwa isikhathi. Ngaphezu kwalokho, Ama-Zappia Amagiya è Ukulungiswa kobucwebecwebe namawashi lemikhiqizo edume kakhulu njengeRolex neLongines.
Ubucwebe be-Zappia Gioielli bezinto zegolide eCatania - indawo yokusebenzela igolide
Ama-Zappia Amagiya, a Catania, ibilokhu isebenza ku ukuhambisana nezinqubo ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Umoya uthambekele kwikhasimende, ekufezeni ukwaneliseka ngemiphumela yothandoIgolide futhi kusukela kwindlela eya kubuciko bendalo, esifundweni, ekujuleni kwencazelo edlula futhi inikeze ukuqondiswa komqondo othokozisayo ohlanganisa isifiso sobucwebe I-Zappia. the Ukudalwa kwento eyigugu yinqubo lapho ukukhanya nodaba kudansa khona ndawonye futhi uchwepheshe wegolide uyakwazi ukubanikeza isikhathi nokuzwana: umphumela uyi-jewel ephelele futhi eyingqayizivele, umphumela wobungcweti nolwazi. Lapho Ubucwebe beZappia Goldsmithubelokhu ehumusha izifiso zamakhasimende zibe ubucwebe okwehlukile. Ngaphezu kwalokho, Ama-Zappia Amagiya è Ukulungiswa kobucwebecwebe nokulungiswa kwamawashi lemikhiqizo esungulwe kakhulu emakethe yekhwalithi nobuchwepheshe bokusebenza.
Amatshe anobucwebe bamaGeatherry Goldsmith Zappia eCatania - Isiko LaseGolide neTekhnoloji Ephakeme
Ama-Zappia Amagiya, eCorso Sicilia 24 a Catania, è Ubucwebe e Igolide che iminyaka engaphezu kwengu-50 ngemuva kokusekelwa kwayo, manje ingenye yamagama abaluleke kakhulu emkhakheni wegolide wedolobha. Umlando kanye nogqozi wokuncintisana okudala ukwakhiwa kwelebhu ye Igolide lapho kudalwa ubuciko khona ubucwebe ujoyina ubuchwepheshe besimanje kakhulu. Kuze kube manje, i- Ubucwebe e IGoldsmith Zappia ingenye yamagama aphezulu emkhakheni wegolide ngamaqoqo we ubucwebe kubonakaliswa ngocwaningo lwezinto zokwakha, ukunaka imininingwane nobungcweti bemisebenzi yobungcweti. Ngaphezu kwalokho, Ama-Zappia Amagiya è Ukulungiswa kobucwebecwebe nokulungiswa kwamawashi lemikhiqizo yokunethezeka nemikhiqizo ehlonishwayo. Uma ufuna eyodwa Ubucwebe e Igolide ukwakha izifiso zakho, khetha isipiliyoni nekhwalithi ye Ama-Zappia Amagiya a Catania.
Ikheli: UCorso Sicilia, 24
I-POSTAL CODE: 95131
Ucingo: 095 0901240
Umakhala ekhukhwini: 338 8587015
Yefeksi: 090 6781720
Inombolo ye-VAT: 01150260832